အထွေထွေဗဟုသုတ Archives - Page2of 107 - Lupyo News
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် . . .ဘာလို့လဲဆိုတော့
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် . . .ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ဖဝါးရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ မိမိချစ်ရသူတစ်ယောက်က လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာ ရှိပါက အချက်တစ်ချက်ကို သိထားရပါမယ်။ နောက်ပြောင်ခြင်း၊ လိမ်ညာမုသားပြောဆိုခြင်းနဲ့ ကလိမ်ကျခြင်းတွေ လုံးဝ မလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ လုပ်မိသွားရင်တော့ သင့်ကို လိမ်ညာပြောတတ်သူလို့ သူ အမြဲသတ်မှတ်နေပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာစလုံးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားများထက် … Read more
ချစ်သူရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကို အမြဲတမ်းရရှိချင်ရင် ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပါ…
ချစ်သူရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကို အမြဲတမ်းရရှိချင်ရင် ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပါ… မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ချစ်သူရဲ့ဂရုစိုက်တန်ဖိုးထားမှုကို အမြဲရရှိနေမှ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ရတာပါ။ ဒီလိုမျိုး ချစ်သူရဲ့ဂရုစိုက်တန်ဖိုးထားမှုကို အမြဲရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေကိုသာ လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာချစ်သူအတွက်တန်ဖိုးရှိပြီး လေးစားစရာကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။ (၁) ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မရှက်ပါနဲ့ သင်ဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက်မဟုတ်လို့၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ မချမ်းသာလို့၊ ဒါမှမဟုတ် အားနည်းချက်တွေများလို့ ကိုယ့်ဘဝကို မရှက်ပါနဲ့၊ ဖုံးကွယ်ဖို့လည်း မကြိုးစားပါနဲ့။ အရှိကိုအရှိတိုင်း လက်ခံပြီး ဘဝကိုအကောင်းမြင်စိတ်ထားပါ။ဒါဟာ စိတ်ထားမွန်မြတ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် သင့်ချစ်သူဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ခံယူချက်ကို တွေ့မြင်ပြီး လေးစားတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ကိုယ့်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်းပါ ဒီကိစ္စကတော့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ သင့်ချစ်သူနဲ့သင်ဟာ လူမမြင်ကွယ်ရာရောက်နေလည်း စောင့်ထိန်းသင့်တာကိုတော့ စောင့်ထိန်းရမှာပါ။ … Read more
လက်ထပ်ပြီးနောက် အချစ်တွေလျော့မသွားဘဲ ပိုချစ်လာကြတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၇)ခု
လက်ထပ်ပြီးနောက် အချစ်တွေလျော့မသွားဘဲ ပိုချစ်လာကြတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၇)ခု ချစ်သူတွေဘဝမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်မဝဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ထပ်ပြီးမှပြောင်းလဲသွားကြတာမျိုး၊ အချစ်တွေလျော့သွားတာမျိုး၊ အဆင်မပြေမှုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်လုံး ကြေကွဲရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် လက်ထပ်ပြီးရင်လည်း အချစ်တွေမလျော့သွားဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်တာထက် ပိုချစ်လာကြတဲ့စုံတွဲတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သူစိမ်းကို ဦးစားမပေးဘူး ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ဇနီး၊ခင်ပွန်းထက် သူစိမ်းကို ပိုဦးစားပေးတာမျိုးမလုပ်ဘူး။ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့သူကိုသေချာသိပြီး သူတို့ကို ဦးစားပေးတယ်။ ဘေးလူ၊ သူစိမ်းတွေပြောတဲ့စကားကြောင့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ နာကျင်အောင်မလုပ်ဘူး။ (၂) အပြစ်မတင်ဘူး၊ အတူတူဖြေရှင်းတယ် ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင် သူ့ကြောင့်၊ ငါ့ကြောင့်ဆိုပြီး အပြန်အလှန် အပြစ်တင်ဖို့ထက် အတူတူဖြေရှင်းဖို့ပဲ စဉ်းစားတယ်။ (၃) ရိုးသားပွင့်လင်းတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လျှို့ဝှက်ထားတာ၊ ထိန်ချန်ထားတာတွေ မရှိဘူး။ … Read more
ချစ်သူကို ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပဲမြင်နေတဲ့ ကိုကိုတွေဆိုတာ ဒီိလိုပါ….
ချစ်သူကို ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပဲမြင်နေတဲ့ ကိုကိုတွေဆိုတာ ဒီိလိုပါ…. ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေဟာ ကိုယ့်ကိုတကယ်ပဲ ခွင့်လွှတ်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်အပြည့်ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို ကိုကိုတွေနဲ့ ချစ်မိတဲ့ ကောင်မလေးတွေကတော့ ဆိုးချင်သလိုဆိုး၊ ချွဲချင်သလိုချွဲ ကိုကိုတွေက အချစ်မလျော့တဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် တိုးလာပါသေးတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ ဒီလိုကိုကို ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အရမ်းကို ကံကောင်းတဲ့သူပါ။ (၁) ချွဲတဲ့အခါ ချစ်သူကို ကလေးလေးလိုပဲမြင်နေတဲ့ ကိုကိုတွေဆိုတာ ချစ်သူက ချွဲတဲ့အခါကျရင် အလိုက်အထိုက်လေး ကြည်နူးစရာကောင်းလောက်အောင် ဂရုစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ချစ်သူက ချွဲတဲ့အခါကျရင် ချစ်သူကို အသည်းတွေယားပြီး ပါးကို လိမ်ဆွဲလိုက်၊ အားကြီးနဲ့ ဖက်လိုက်လုပ်တတ်ကြသူတွေပါ။ ပြီးတော့မှ ကိုယ်ကနာသွားလို့ မဲ့သွားရင်လည်း အသည်းအသန် ပြန်ပြီး ချော့တတ်ကြသူတွေပါ။ (၂) ရစ်တဲ့အခါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရစ်လို့အကောင်းဆုံးက ကိုကိုတွေပါ။ … Read more
မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာထက်​ပိုတဲ့​ယောက်ျားတွေ ရဲ့ အကွက်တွေ…
မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာထက်​ပိုတဲ့​ယောက်ျားတွေ ရဲ့ အကွက်တွေ… မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာထက်​ပိုတဲ့​ယောက်ျားတွေ ရဲ့ အကွက်တွေ… ကျွန်တော့်ဘော်ဒါထဲမှာ_ဘဲတပွေ_ရှိတယ်…ကေတီဗွီတို့ မာဆတ် တို့က စော်တွေနဲ့ ဇယားထားပြီးရင် သူ့ဖုန်းထဲမှာ ဒီလို မှတ်ထားတယ်…သဇင် ဆို ဗိုလ်မှူးကြီးသန့်ဇင် လဝန်း ဆို လဝက ညွှန်မှူး…၊သော်တာ ဆို ညွှန်ချုပ် ဦးသန်းတင် မိုးစက် ဆို ဒေါက်တာမင်းစိုး ဘာညာ..ဘာညာပေါ့..ဟို စော်တွေက ဖုန်းဆက်ပြီဆို..သူ့ မိန်းမ ခမြာ မကိုင်ရဲရှာဘူး.. “ယောက်ျားရေ…ဗိုလ်မှူးကြီး ဘယ်သူဆိုလား..ဖုန်းလာတယ် ဆိုပြီး ဖုန်းကလေး အပြေးလာပေးရရှာတယ်… ဖုန်းကတော့..မိန်းမ မကြားလောက်တဲ့နေရာ သွားပြောပေါ့… သူ့ မိန်းမခမြာ.. ဟယ်..ငါ့ယောက်ျား အကောင်ကြီးကြီးတွေနဲ့ အလုပ် တွေ လုပ်နေပါလားဆိုပြီး ပီတိတွေဖြစ်လို့…. သြော်..မိန်းမ မာယာသဲကိုးဖြာ ထက် ယောက်ျား ဖင်ဂေါင်း … Read more
🤍မနေ့ကထက် ဒီနေ့ပိုချစ်စေတဲ့နည်းလမ်း ( ၄ ) သွယ် 🤍 အချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေလား။ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်လို နားလည်မှုတွေထပ်ပေးရဦးမလဲ။ ပြဿနာတွေဆိုတာ အမြဲကိုယ့်ဆီဘဲ ရောက်လာ နေတယ် လို့ထင်သလား။ ဒီချစ်မိခဲ့တဲ့ရင်ခုန်သံလေးတွေ ကြောင့် ခေါင်းစားနေရတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်တဲ့ေ နရာမှာ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ ခံစားနိုင်စေဖို့ လက်ရှိပြည့်စုံနေတဲ့ချစ်သူတွေကတော့ ပိုပီးတော့ ချစ်သက်ရှည်နိုင်ဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အပေးအယူမျှ…..ဂရုစိုက်တတ်မှ တင်းကျပ်စွာချည်နှောင်ထားတဲ့ ချစ်နည်းထက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ နားလည်မှုပေးကြည့်ပါ။ အမြဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြပါ။ အချိန်တွေ မအားလပ်ရင်တောင် တစ်ပတ်တစ်ခါ စကားလက်ဆုံ ကျဆွေးနွေးပါ။ နွေးထွေးတဲ့ လက်တစ်စုံနဲ့အတူ ကမ္ဘာပတ်သလို လမ်းလျှောက် … Read more
သင့်ချစ်သူ သင့်ကိုအမြဲလွမ်းပြီး ဖုန်းခဏခဏခေါ်စေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ… ချစ်သူက ဖုန်းမခေါ်ရင်သာ စိတ်ကောက်မယ်၊ ဖုန်းခေါ်လို့ စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးတော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ချစ်တဲ့ သူက ခဏခဏဖုန်းခေါ်တာကို(အလုပ်ရှုပ်တဲ့ အချိန်ကလွဲလို့)လူတိုင်း ခံချင်ကြမှာပါ။ ချစ်သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အချိန်ပြည့်နေရာယူထားချင် ရင်၊ ချစ်သူက ကိုယ့်ကို မကြာခဏလွမ်းတာကို ခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်းကြီးနေလို့တော့ မရပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ မာယာပရိယာယ်လေးတွေ လိုပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ကို သုံးကြည့်ပါ။ ချစ်သူက သင့်ကို လွမ်းပြီး ခဏခဏ ဖုန်းခေါ်စေချင် ရင် လုပ်ရမှာတွေကတော့…. (၁) ချစ်သူကို အံ့သြအောင်လုပ်ပါ… အရင်ဆုံး သူ့ရင်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို လွမ်းတဲ့ စိတ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်ဖို့အတွက် လုပ်ရမှာက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနေတဲ့ … Read more
လူတိုင်းဘဝမှာ ရင်ထဲစွဲထင်ကျန်ရစ်နေတတ်တဲ့ အချစ် (၃)မျိုး
လူတိုင်းဘဝမှာ မမေ့နိုင်ဘဲ ရင်ထဲစွဲကျန်နေတတ်တဲ့ အချစ် (၃)မျိုး လူတိုင်း ဘဝမှာ အချစ်နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေဆိုတာ သေချာပေါက်ရှိပြီး ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ အချစ်တွေကလည်း တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ် မတူနိုင်သလို၊ ခံစားချက်ကလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ဘဝမှာ အချစ်တွေ အများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ ရင်ထဲစွဲပြီး အမှတ်တရဖြစ်နေတာကတော့ ဒီအမျိုးအစားသုံးမျိုးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အချစ်ဦး ဘဝမှာ အမှတ်ရဆုံးအချစ်ကိုပြောပါဆိုရင် လူတော်တော်များများက အချစ်ဦး လို့ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ စချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပထမဆုံးခံစားချက်၊ ပထမဆုံးရင်ခုန်ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ပထမဆုံးအသည်းကွဲတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အချစ်ဦးကို မမေ့နိုင်ကြပါဘူး။ (၂) မျှော်လင့်မထားဘဲဖြစ်လာတဲ့အချစ် ဒီလိုလူမျိုးကို ချစ်မိလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘဲ ချစ်သွားမိတာမျိုး၊ ဒီအချိန်မှာ ချစ်မိမယ်လို့ မထင်ထားဘဲ ချစ်မိသွားတာမျိုး၊ ကိုယ်တွေးထားတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ အချစ်မျိုးကိုလည်း လူတွေက မမေ့နိုင်ကြပါဘူး။ (၃) … Read more
ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အရာ(၅)မျိုး
ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အချက်(၅)ချက်… မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နေပါစေ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် အလွန်ကို ဝမ်းနည်းရတတ်ပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲ ဒီလိုအရာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်နော် …။ (၁) သူကိုယ့်ကိုယ်မချစ်တော့ဘူးလို့ ထင်လာတယ် တချို့ ယောကျာ်းလေးတွေက ချစ်သူဖြစ်တာကြာလာရင် အရင်ကလောက်ဂရုမစိုက်တတ်တော့သလို၊ ဂရုစိုက်ဖို့လည်း သိပ်မလိုဘူး၊ ငါတို့နှစ်ယောက်က ပြတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးတတ်ကြပါတယ် ။မိန်းကလေးတွေကတော့ ဂရုမ စိုက်တော့တာဟာ မချစ်တော့တာပဲလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်တဲ့သူက ဂရုမစိုက်တာဟာ သူ့ကို မချစ်တော့တာပဲလို့ ယူဆသွားနိုင်ပါတယ် …။ (၂) အတွေးလွန်လာတယ်” သူ ငါ့ကိုဘာလို့ ဂရုမစိုက်တော့တာလဲ၊ အသစ်တစ်ယောက်တွေ့နေလို့လား၊ ငါ့ကိုစိတ်ကုန်နေတာလား၊ ငါ့ကိုထား သွားဖို့ကြံစည်နေတာလား … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဒီအမှား(၅)ခုကို လုပ်မိတာ သူ့ချစ်သူကို အရမ်းအရမ်း ချစ်လို့ပါ
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဒီအမှား(၅)ခုကို လုပ်မိတာ သူ့ချစ်သူကို အရမ်းအရမ်း ချစ်လို့ပါတဲ့ အချစ်ရေးမှာ အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးတွေပါ အမှားလုပ်မိလေ့ရှိကြပါတယ်။ အမှားဆိုတာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အတွက် မရည်ရွယ်တဲ့အမှားမျိုးဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်နိုင်လောက်တဲ့ အမှားလုပ်မိသူကို အပြစ်မဆိုပဲ ၊ နောက်မဖြစ်ဖို့သာ ပြောပြရမှာပါ။ အချစ်ရေးမှာ အမျိုးသမီးအများစု ပြုလုပ်မိလေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေထဲက အမျိုးသားတွေ ခွင့်လွှတ်ပေးသင့်တဲ့ အမှား (၅) ခုရှိပါတယ်။ ၁။ စိုးရိမ်မှု လွန်ခြင်း သင် ဘာတွေမဟုတ်တာ လုပ်နေပြီလဲ။ သူ့ကိုမပြောထားတာ ဘာတွေများ ရှိနေပြီလဲ ဆိုပြီး တစ်ခါတစ်လေ စိုးရိမ်မှု လွန်ကဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို အမျိုးသားတွေဘက်က နားလည်အောင် သေချာရှင်းပြဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဘက်ကလည်း စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲရင် သံသယဖြစ်လာတတ်တာ သတိပြုရမှာပါ။ ၂။ စကားများခြင်း စကားများခြင်းဟာ … Read more